उद्यमशिलता बिकास गर्दै महिला::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ३२ जेठ – राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत बागलुङको जैमिनी नगरपालिका वडा नं. ५ बिनामारेमा तरकारी खेती बिस्तार अभियानमा स्थानीय महिलाहरु सक्रिय भएका छन् । व्यवसायिक तरकारी खेती मार्फत आयआर्जन बनाउने गरी थालिएको अभियानमा महिलाको आर्कषण थपिएको हो । ग्रामीण उद्यमशिलता बिकास केन्द्र बागलुङको अगुवाईमा यहाँका महिलालाई एकजुट गराउन थालिएको हो । पहिलो चरणमा ३० महिलालाई एकजुट बनाएर प्लाष्टिक टनेल तथा थोपा सिंचाई दिएर व्यवसायिक बनाइएको हो । ती महिलाले घरघरमा टनेलमा बेमौषमी तरकारी उत्पादनको काम थालिसकेका छन् । केन्द्रले प्रविधि समेत हस्तान्तरण गरेपछि महिलाहरु उत्पादनमा हौसिएको केन्द्रकी अध्यक्ष डिलकुमारी थापाले बताइन् । उद्यमशिलता बिकास बढाएर उनीहरुलाई उत्पादनमै लगाउन यो अभियान थालिएको उनलेब ताइन् । किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको बजारीकरणका लागि केन्द्रले सहयोग गर्ने भएको छ । यसरी सहयोग पाएपछि उनीहरुलाई काममा जाँगर बढेको समेत महिलाले बताए ।
केन्द्रले काम थालेका महिलालाई ५ दिने तालिम टनेल व्यवस्थापन तथा उद्यमशिलता बिकास तालिम समेत दिएको छ । उक्त तालिममा कृषि प्राविधिक अर्जुन प्रसाद श्रेष्ठ र उद्यमशिलता बिकास सहजकर्ता जीवन थापा अदितले सहजीकरण गरेका छन् । बिहिवार सम्पन्न तालिम समापन समारोहमा जैमिनी नगरपािलकाका उपप्रमुख लीला रानाले महिलाहरुको उद्यमी बन्ने चाहनालाई नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष गोपालप्रसाद शर्मा, बरिष्ठ सामाजिक बिकास अधिकृत भेषराज शर्मा, कार्यपालिका सदस्य रुद्र केसी, सदस्य देवी नेपाली, केन्द्रकी अध्यक्ष डिलकुमारी थापा, वडा सदस्य देवेन्द्र रेग्मी र प्राविधिक प्रशिक्षक अर्जुनप्रसाद श्रेष्ठले बोलेका थिए ।